Balad Amiin | JILYAALE_ONLINE
Category Archives: Balad Amiin
Xildhibaanada Baydhabo:- War kaalaya hadiidina maanta ayeey ugu fiican tahay lacag badan ayuu wadaa yey idin gafin waa fursad.
July 31, 2007 by jilyaale
Halkaan ka daawo Continue reading →
Posted in Balad Amiin.
Anigaa Soomaaliland aa adiga maa waalan mise shirkaa wareer galay, “Anigoo Jareer weyn ah ayaa maantana hadalkaas ii quurtay, xumaan ahaa taas.
July 18, 2007 by jilyaale
Waxba ma ogid ninkaan Geedi awoodii dalka oo dhan asagaa lawareegay waad iska seexatay anigaa kula shaqeynaaya ee ila Soco.
July 16, 2007 by jilyaale
Adeer dhulka hoostiisa ayaan ka dhisamayaa guri casri ah oo aan hoobiyaha uga gambado
March 20, 2007 by jilyaale
Ruunki (Jilyaale_Online) 20, March 2007